Sandals Resorts Executive Sachigaro Akapihwa Vechidiki Vatungamiriri muKufamba Pacesetter Mubairo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Sandals Resorts Executive Sachigaro Akapihwa Vechidiki Vatungamiriri muKufamba Pacesetter Mubairo
Awards • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Jamaica Kupwanya Nhau • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Resorts • ushanyi • Trending Now
Adam Stewart Anokudzwa nekumisikidza Muenzaniso weKunaka muKufambisa Indasitiri
Adam Stewart, Executive Chairman weSandals Resorts International (SRI), kambani yemubereki yeCaribbean inotungamira yemhando yepamusoro-inosanganisira mabhenji emahombekombe maSandals Resorts neBeaches Resorts, akagamuchira 2021 "Pacesetter" Mubairo neChishanu, pagore reVechidiki Vatungamiriri muKufamba Kanzuru mu Jamaika. Travel ALLIES Society, muridzi wechiitiko ichi, inopa uyu mubairo wakatanhamara gore rega rega kune vadiki vanofamba munzira vanokoshesa kutendeka nekuzvipira kune vanhu vavanotungamira uye vavanoshumira, vachitungamira vamwe kuita zvakafanana.
Stewart akashanda seMutevedzeri Wachigaro weSRI kweanopfuura makore gumi, achibatsira mukusimudzira kweSandals Resorts International brand.
Akatungamira shanduko yechiratidzo ichi kwazvino Luxury Inosanganisira® siginecha uye akaunza pekutanga nzvimbo pamusoro pemvura.
Stewart anowedzera anoshanda seMutungamiriri wekambani philanthropic ruoko, Iyo Sandals Foundation.
Pachitsuwa chaakakurira, akatarisana nevateereri vevatungamiriri vechidiki vane pfungwa dzakafanana uye nenyanzvi dzekufamba, Stewart akafunga nezve ruzivo rwake rwekuva mutungamiri, pamwe neizvo zvababa vake vakafa, Muvambi weSRI Gordon "Butch" Stewart, uyo akamutsa nekukurudzira hukuru munharaunda yezvekushanya muhupenyu hwake hwese. "Ndinokutendai nemukana uno wekurangarira nekugovana nemi nhasi vane mapendekete andakamira panzira yangu yekuva nekufungisisa zvidzidzo muhutungamiriri rwendo rwangu pachangu rwandidzidzisa uye ndicharamba ndichindidzidzisa," akadaro Executive Chairman.
Asati asimuka kuhutungamiriri hwazvino, Stewart akashanda semutevedzeri Wasachigaro kweanopfuura makore gumi, zvichipa kusimudzira chiratidzo cheSandals Resorts International hachigumi. Akatarisira nguva yekuwedzera kukuru; kusanganisira zvino matatu emahombekombe emahombekombe muJamaica neTurks neCaicos, yechina ichiuya nekukurumidza kuSt. Vincent neGrenadines, pamwe neSandals Resorts gumi neshanu muAntigua, Saint Lucia, The Bahamas, Barbados, uye Grenada, ine gumi nenhanhatu ichangobva kuziviswa kuvhura muCuracao muna Kubvumbi 2022. Akaisawo shanduko yechiratidzo kune yayo ikozvino Luxury Inosanganisira® siginecha uye akaunza yekutanga nzvimbo pamusoro pemvura pekugara. Stewart anowedzera anoshanda seMutungamiriri wesangano rerunako, The Sandals Foundation, sangano risingabatsiri rinotsigira zvikoro, zvipatara nemhuri dzinenge dzichida, kuzadzisa vimbiso yekudzosera munharaunda yeCaribbean.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve iyo mibairo-inokunda zvigadzirwa zveSandals Resorts International, shanya sandals.com uye beaches.com .
Nezve Sandals Resorts International
Sandals Resorts International (SRI) ndiyo kambani yemubereki yemamwe maratidziro anoonekwa anosanganisira Sandals® Resorts, Beaches® Resorts, Grand Pineapple Beach Resort, Fowl Cay Resort uye Yako Jamaican Villas. Yakavambwa muna 1981, naGordon “Butch” Stewart mushakabvu, SRI iri kuMontego Bay, Jamaica uye inoona nezve kusimudzira nzvimbo dzekushandira, zviyero zvebasa, kudzidziswa kwehunyanzvi uye mashandiro ezuva nezuva. Kuti uwane rumwe ruzivo, shanya Sandals Resorts International.
Nezve iyo Sandals Foundation
Iyo Sandals Foundation ndiyo ruoko rwehupenzi rweSandals Resorts International (SRI), kambani inotungamira yemhuri yeCaribbean. Sangano re501 (c) (3) risiri purofiti rakagadzirwa kuti rirambe richiwedzera pamusoro pebasa rerubatsiro rakaitwa neSandals Resorts International kubva pakavambwa muna 1981 kuita chinhanho chakakosha muhupenyu hwevanhu munharaunda iyo SRI inoshanda muCaribbean yese. . Iyo Sandals Foundation inobhadhara mapurojekiti mumatatu akakosha nzvimbo: dzidzo, nharaunda uye nharaunda. Zana muzana muzana yemari dzakapihwa neruzhinji rwevanhu kuSandals Foundation dzinoenda zvakananga kuzvirongwa zvinobatsira nharaunda yeCaribbean. Kuti udzidze zvakawanda nezveSandals Foundation, shanyira online pa neworleanshamptoninns.org .
Nezve iyo Travel ALLIES Sosaiti
Iyo Travel ALLIES Society, iboka rakasarudzika revanhu vanotungamira vafambi, vachiuya pamwe nebasa rekutsigira vamwe vatungamiriri muindastiri. Ivo vakazvipira kushanda mabhizimusi nekuvimbika uye kubata vatengesi vavo uye shamwari dzebhizinesi neruremekedzo. Iyo nzanga ine chinangwa chekutsigirana nehukama hwakasarudzika sezvavanosimudzira hutungamiriri uye nekushandura indasitiri yekufamba pamwechete. Nhengo dzeAIDS dzinokoshesa kudzidza, kushandira pamwe uye kugovana tsika dzakanakisa.
Tourism Inofanirwa Iko Kuve Chikamu Chekugadzirisa Kuchinja Kwemamiriro ekunze ...
Dan Pimental Management anoti:
Svondo 22, 2021 pa 09: 59
Mhoroi, Iyi posvo yakakosha ruzivo. Ndine kudzidza kwakawanda. Ini ndainakidzwa nekuverenga kwayo iyi positi zvakakwana kuti nditsvage kunyora ichi chakanakisa chinyorwa uye chinobatsira posvo yekutenda nekugovana.